The Rohingya News Bank : UNICEF
Bangladesh: Assessment of the Education Sector response to the Rohingya crisis - Rohingya refugee response (March 2021)
Labels: 2021, Bangladesh, Education, en, Reach, Report, Rohingya Crisis, UNICEF
Labels: 2019, Education, en, Rohingya, Rohingya youth, UN News, UNICEF, Video
This isasummary of what was said by UNICEF spokesperson Christophe Boulierac – to whom quoted text may be attributed – at today's press briefing at the Palais des Nations in Geneva.
GENEVA,3May 2019 – This week, UNICEF inaugurated the 2,000th learning center in the Rohingya refugee camps of Cox’s Bazar of Bangladesh. More than 180,000 children are now learning in the 2,000 UNICEF-supported learning centres, taught by 4,000 teachers who have been trained by UNICEF partners. These children are aged between4to 14 years.
Labels: 2019, Bangladesh, Children, Education, en, News, Rohingya, UNICEF
Unicef Malaysia ambassador Lisa Surihani moved to tears in Cox’s Bazar.
Unicef Malaysia national ambassador Lisa Surihani was overcome with emotion after listening to the Rohingya refugees share accounts of how they had to flee their homes in Myanmar. Photo: S. INDRAMALAR/The Star
On her first day at the refugee camps in Cox’s Bazar, Bangladesh, actress Lisa Surihani’s eyes welled up with tears.
“I couldn’t control myself,” she shares. “I didn’t want to cry but hearing their stories … listening to what the women and children had to go through to escape from the violence in Myanmar and make their way to Bangladesh … it was truly unfathomable and I was overcome withawhole gamut of emotions.
Labels: 2019, CHARITY, Children, Cox's Bazar, en, Humanitarian Aid, LISA SURIHANI, News, Refugees, Rohingya, Star2.com, UNICEF
Labels: 2019, Bangladesh, Chicken pox, en, Refugee Camp, Rohingya, UNICEF, WHO
Myanmar Army Helicopter Attack Kills at Least 10 Rohingya Muslims in Rakhine State.
A helicopter attack by Myanmar’s army on Wednesday killed at least 10 Rohingya Muslims and injured more thanadozen others in violence-wracked Rakhine state, the latest civilian casualties in the armed conflict between government soldiers and the rebel Arakan Army (AA), local villagers told RFA’s Myanmar Service.
Labels: 2019, AA, Arakan Army, en, Helicoper, IDP, Landmines, Myanmar Army, RFA English, Shelling, UNICEF
India Blooms News Service | @indiablooms | 28 Feb 2019, 12:52 pm
#Rohingya, #Myanmar, #RohingyaCrisis
New York, Feb 28 (IBNS): With around halfamillion in effect, stateless Rohingya refugee children living in Bangladesh’s Cox’s Bazar camp, the United Nations Children’s Fund (UNICEF) chief stressed on Friday that the international community must address their “untenable situation” and “invest in this generation”.
Labels: 2019, Children, en, News, Refugee, Rohingya, UNICEF
Cox's Bazar ဒုက္ခသည်စခန်း ရိုဟင်ဂျာကလေးတွေ အရေး ကုလစိုးရိမ်
​ဒေါ်ခင်မျိုးသက် ၊ 28 ဖေဖော်ဝါရီ၊ 2019
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ Cox’s Bazar က Balukhali ဒုက္ခသည်စခန်းက ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ကလေးငယ်။ (ရိုက်တာ နိုဝင်ဘာ၊ ၁၅)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Cox’s Bazar က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ နိုင်ငံမဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် က လေးငယ် သန်းတဝက်လောက်ရှိနေပြီး သူတို့ရဲ့အနေထားက မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ပြီး စိတ်ဓါတ်ကျဖို့ရာ သိပ်ကို လွယ်ကူစေတာကြောင့် ဒီကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဟာ အတော်ကို စိုးရိမ်စရာ ကောင်းနေတယ် လို့ UNICEF ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ ကပြောပါတယ်။
Labels: 2019, Cox's Bazar, mm, UNICEF, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရခိုင်, ရိုဟင်ဂျာ
​ဒေါ်ခင်မျိုးသက်၊ 28 ဖေဖော်ဝါရီ၊ 2019
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ Cox’s Bazar ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် ကလေးငယ် သန်းတ ဝက် လောက်ရှိနေပြီး သူတို့ရဲ့အနေထားက မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ပြီး စိတ်ဓါတ်ကျဖို့ရာ သိပ်ကိုလွယ်ကူစေ တာကြောင့် ဒီကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဟာ အတော်ကို စိုးရိမ်စရာကောင်းနေတယ်လို့ UNICEF ကပြောပါတယ်။ ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က ပြောပြထားပါတယ်။
Labels: 2019, mm, UNICEF, Video, ဗွီအိုအေ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ကော့ဇ်ဘဇား
Skills Training to Equip 18,000 Rohingya Adolescents with Hope foraBetter Future
ARTICLE • TUESDAY, FEBRUARY 26th 2019
UNICEF Executive Director Henrietta H. Fore visits new World Vision centre for adolescents
Out of school for more than 18 months, an estimated 117,000 Rohingya adolescents living in the world’s largest refugee camp desperately need learning opportunities. However, only four percent of these boys and girls have access to any form of education, life-skills or vocational training.
Labels: 2019, Bangladesh, BD R.Camp, en, Rohingya, skills training, UNICEF, World Vision
မြန်မာဘက်က ရိုဟင်ဂျာတွေ ဌာနေပြန်ရေးအတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ သဘောတူ စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားပေ မယ့် ဒုက္ခသည်တွေ ဌာနေ ပြန်ရေးအတွက် သင့်လျော်တဲ့ ဝန်းကျင်ဖန်တီးပေးဖို့ ပျက်ကွက်နေတယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဝန်ကြီးချုပ် Sheikh Hasina က ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, mm, Sheikh Hasina, UNICEF, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ
Back to School in Cox's Bazar
More than 145,000 Rohingya refugee children return to school
Asanew school year begins, more than 145,000 Rohingya refugee children are heading back to school in Cox's Bazar, Bangladesh.
A huge effort from the humanitarian community has seenanetwork of around 1,600 Learning Centres constructed throughout the refugee camps, providing vital access to education for children who fled violence in Myanmar.
Labels: 2019, BD R.Camp, CODEC, Cox's Bazar, en, Kutupalong, Rohingya, UNICEF
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ နေအိမ်မှာ ဗီယက်နမ် ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Nguyen Quoc Dzung နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ အခုလို ပြောကြားလိုက်တာပါ။
Labels: 2019, mm, UNICEF, VOA Burmese, ဗီယက်နမ်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရခိုင်, ရှိတ်ဟာစီနာ, ရိုဟင်ဂျာ
လက်နက်ကြီးအစမှန်ပြီး သေဆုံးသွားတဲ့ ရသေ့တောင်မြို့နယ် သမီးလှကျေးရွာက အသက် ၇ နှစ်အရွယ် မောင်နိုင်စိုးရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ၂၀၁၉၊ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်နေ့က သယ်ဆောင်လာစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် သမီးလှကျေးရွာမှာ အစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံ ထိမှန်ပြီး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ အသက် ၇ နှစ်အရွယ် မောင်နိုင်စိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝမ်းနည်းကြောင်းနဲ့ ဒီဖြစ်ရပ်အပေါ် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း စစ်တွေမြို့အခြေစိုက် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့တွေက မနေ့က ကြေ ညာချက်ထုတ်ပြန် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, AA, ALP, mm, RFA Burmese, UNICEF, စစ်တွေ, တပ်မတော်, ရခိုင်, ရခိုင် တပ်မတော်, သတင်း, စောမြရာဇာလင်း
ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကို UNICEF အကြီး အကဲ သွားရောက်လေ့လာ
ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ရဲ့ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Ms. Henrietta H. Fore စစ်တွေလေဆိပ်ကို ၂၀၁၉၊ ဇန်နဝါရီ ၂၉ က ရောက်ရှိလာစဉ်
ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ရဲ့ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Henrietta H. Fore ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့က ဒုက္ခသည်စခန်းအချို့မှာရှိနေတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အခြေအနေတွေကို ဒီနေ့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
Labels: 2019, mm, UNICEF, ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့, စစ်တွေ, ရခိုင်, သတင်း
ကိုဖီအာနန်ကော်မရှင် အကြံပေး ချက်တွေ အကောင် အထည်ဖေါ်ဖို့ UNICEF အကြီးအကဲ မြန်မာကို တိုက်တွန်း
ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ Henrietta Fore က မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ကိုဖီအာနန် ဦးဆောင်တဲ့ ရခိုင်အရေးကော် မရှင်ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းရေး အကြံပေးချက်တွေကို လိုက်နာ ဖေါ်ဆောင်ဖို့ မြန်မာအစိုးရကို တိုက် တွန်းလိုက်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ထွက်ပြေးခိုလှုံတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ၇ သိန်းကျော် ဌာနေ ပြန်ရေး အတွက်လည်း သင့်တော်တဲ့ အခြေနေတွေ ဖန်တီးပေးဖို့ လိုအပ်နေသေးကြောင်း နေပြည် တော် မှာ တနင်္လာနေ့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Labels: 2019, mm, UNICEF, VOA Burmese, ကုလသမဂ္ဂ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
Labels: 2019, en, Kofi Anan, Myanmar, News, Reuters, Rohingya, UNICEF
Rohingya children learn at an educational center inarefugee camp in Cox's Bazar, Bangladesh on Jan. 12, 2019.
Kaan Bozdogan—Anadolu Agency/Getty Images
Labels: 2019, Bangladesh, BD R.Camp, en, News, Refugee, Rohingya, UNICEF
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဒုက္ခသည်စခန်းတွေရဲ့ ပညာရေး UNICEF ဆောင်ရွက်ပေးနေ
■ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ရိုဟင်ဂျာကလေးငယ် ၁ သိန်း ၄ သောင်း ၅ ထောင်လောက်ဟာ အခုအချိန်မှာ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ရဲ့အကူအညီနဲ့ ပညာသင်ကြားနေကြပြီလို့ သိရပါတယ်။
ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာ ကျောင်းစာသင်ခန်းပေါင်း ၁၆ဝဝ လောက် တည်ဆောက်ပြီးသွားပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
Labels: 2019, mm, Refugee, RFA Burmese, UNICEF, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း